Bogga ugu weyn 2020 Shuangye ebike katalogga
Tani waa tii ugu dambeysay ee buuga-wadista baaskiilka korantada Shuangye ee 2020, oo ay ku jiraan naqshad cusub iyo bushkuleeti cusub R&D-ga korantada. Nooca nooke ah ee aad rabtid, dhammaantood waa laga heli karay kataarahan 2020 Shuangye ebike, sida bushkuleeti-buuro, ebikes magaalada, laablaabyada bushkuleetiga, xirmooyinka baaskiilka korantada ama baykeeriga birike iyo wixii intaa ka badan.
Halkan waxaa ah isku xirka khariidadda baaskiilka korantada ee 2020 Shuangye, kaas oo taageeraya akhrinta internetka iyo soo dejinta.
Shuangye wuxuu diiradda saarayaa soosaarida baaskiilka korantada iyo dhoofinta qiyaastii 12 sano, wuxuuna siiyaa tayo sare iyo qaabeynta baaskiilada korantada macaamiisheena adeeg aad u fiican. Taageerada adeegga OEM & ODM ee awoodda batteriga, cabbirka gawaarida, midabka, xirmada, ECT.
Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo muuqaal ah iyo macluumaad, booqo our Websiteka rasmiga ah ama ku dhaaf farriimahaaga hoosta. Markaad wax weydiiso, ka dib ayaan kaaga jawaabi doonnaa (ka jawaabnaa su'aalahaaga ama waxaan kugula talinaynaa waxyaabaha ugu fiican) 24 saacadood gudahood.